बलिउड सन् २०१७ मा को अभिनेता हिट को फ्लप ?
४ कार्तिक २०७५, आइतवार | Oct 21, 2018 | 00:50:54
By radiojanakpur on	 December 31, 2017 मनोरञ्जन
पुस १६– सन् २०१७ सकिएर सोमबारदेखि सन् २०१८ सुरु हुँदैछ । यो वर्ष अर्थात २०१७ साल बलिउडका अभिनेतामध्ये केहीको समय निकै लाभदायी रह्यो भने केही अभिनेताहरुका लागि यो वर्ष सम्झना योग्य रहेन अर्थात यो वर्ष उनीहरुले चाहे जस्तो भएन ।
१. सलमान खान – २०१७ मा सलमान खानका २ वटा फिल्म आए । दुईवटै फिल्मबाट उनले २ खालको प्रतिकृया पाए । २०१७ को मध्यतिर फिल्म ट्युवलाईट रिलिज भएको थियो । बक्स अफिसमा फिल्मले सोचे जस्तो सफलता पाएन ।
सलमान खानको करियरमा ट्युवलाईट असफल रह्यो । तर वर्षको अन्तिममा रिलिज भयो फिल्म ‘टाईगर जिन्दा है’ । जुन फिल्मले बलिउडकै इतिहासमा नयाँ नयाँ कीर्तिमान राख्दै निकै सफल फिल्म बनेको छ । ट्युबवलाईटको असफलता भन्दा ठूलो सफलता हासिल गरेर ‘टाईगर जिन्दा हे’ ले भूक्तान गरिदिएको छ । बलिउडमा अहिले चर्चा छ त केवल सलमान खानको या उनको फिल्म ‘टाईगर जिन्दा है’ को ।
२. शाहरुख खान– शाहरुख खानले वर्षको सुरुवातमा फिल्म ‘रईस’ मार्फत सफलता हासिल गरे । ‘रईस’मा शाहरुखले गरेको अभिनयको प्रशंसा पनि भयो । त्यही सफलतालाई निरन्तरता दिनका लागि शाहरुख अर्को फिल्म ‘जब ह्यारी मेट सेजल’ मार्फत अनुष्काको साथमा आए ।
तर योपटक उनले चाहेको भन्दा उल्टो नतिजा आयो । फिल्म जब ह्यारी मेट सेजल चलेन । फिल्म वितरकले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्‍यो । पछि त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरुप शाहरुखले रोयल्टी तिरेका थिए । २०१७ साल शाहरुख खानका लागि ठिकठाक नै रह्यो ।
३.आमिर खान – आमिर खान २०१७ मा एक मात्र फिल्म ‘सिक्रेट सुपरस्टार’मा आए । फिल्ममा आमिर प्रमुख भूमिका नभएर सहायक भूमिकामा आएका थिए, जुन भूमिका निकै महत्वपूर्ण थियो । फिल्म निकै सफल भयो ।
सानो ब्यानरको फिल्म भएर पनि यसले व्यापार भने ठूलो ग¥यो । हिन्दी फिल्मको इतिहासमा सानो ब्यानरको फिल्महरु मध्येबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्ने फिल्म बन्यो ‘सिक्रेट सुपरस्टार’।
४. सैफ अली खान– सलमान, शाहरुख र आमिर, यी तीन खानपछि बलिउडको चौथो खान सैफ अली खानका लागि २०१७ निकै खराव वर्ष सावित भयो । सैफका २ वटा फिल्म रिलिज भएका थिए ‘रंगुन’ र ‘सेफ’ ।
यि दुवै फिल्म बक्स अफिसमा सुपर फ्लप भए । करियरको हिसाबले सैफका लागि साल २०१७ सम्झन लायक रहेन ।
५. अक्षय कुमार – अक्षय कुमारको लागि विगत २ वर्ष यतादेखि नै मंगलमय समय चलिरहेको छ । सन् २०१६ मा अक्षय कुमारका ३ वटा फिल्म रिलिज भएका थिए ‘एयर लिफ्ट’, ‘रुस्तम’ र ‘हाउसफुल ३’ ।
तीनैवटा फिल्म निकै सफल रहे । २०१७ मा उनका २ वटा फिल्म रिलिज भए ‘जोली एलएलबी २’ र ‘ट्वाईलेट एक प्रेम कथा’ । यी दुबै फिल्मले १ सय करोड कमाएर निकै हिट भए । फिल्मको कथा र अक्षयको अभिनय दर्शकले धेरै मन पराए । यसर्थ अक्षयका लागि वर्ष २०१७ फलदायी रह्यो ।
६. आयुष्मान खुराना – आयुष्मानको २०१७ मा तीनवटा फिल्म रिलिज भए । ‘बरेली कि बर्फी’ र ‘शुभ मंगल सावधान’ सफल भए, तर उनको तेस्रो फिल्म ‘मेरी प्यारी बिन्दु’ सुपर फ्लप भयो ।
‘बरेली कि बर्फी’ र ‘शुभ मंगल सावधान’मा आयुष्मानले गरेको अभिनयको निकै प्रशंसा भयो । उनको अर्को फिल्म ‘मेरी प्यारी बिन्दु’ले सफलता नपाएपनि आयुष्मानको अभिनयको भने यस फिल्मबाट पनि सबैले तारिफ गरेका थिए । तसर्थ आयुष्मनका लागि २०१७ शुभ मंगल नै रह्यो ।
७. राजकुमार राव– राजकुमार रावका पाँचवटा फिल्म रिलिज भए । उनका लागि सन् २०१७ सम्झन लायक वर्ष बनेको छ । यसको अर्थ उनका पाँचवटै फिल्मले राम्रो कमाई गरेको होइन ।
पाँच फिल्मध्ये केही असफल भए र केही सफल भए । जसमा उनको ‘ट्रयाप्ड’, ‘बहेन होगी तेरी’ र ‘शादी मे जरुर आना’ असफल रहे । बरेली कि बर्फी र न्युटनले बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार गरे । उनको फिल्म न्युटनले ओस्कारका लागि आधिकारी प्रवेश पाएको छ ।
८. इरफान खान : ईरफान खानको फिल्म ‘हिन्दी मिडियम’ले यस्तो व्यापार ग¥यो । फिल्मले गरेको कमाईले फिल्मका उत्पादक, वितरक र दर्शकलाई नै चकित तुल्याईदियो ।
यस फिल्ममा उनले गरेको अभिनयलाई दर्शकले मन पराए । साथै समग्र फिल्मको प्रशंशा भयो । तर उनको अर्को फिल्म करिब करिब सिंगलले राम्रो व्यापार गरेन । फिल्म असफल भयो ।
९. बरुण धवन–बरुण धवनलाई बलिउडको मनी मेसिन भन्न थालिएको छ । बरुणले अहिलेसम्म जम्मा ८ वटा फिल्ममा काम गरेका छन् । आठ फिल्ममध्ये कुनै पनि फिल्मले घाटाको व्यापार गरेको छैन ।
केही फिल्मले त २०० करोड भन्दा बढीको व्यापार गरेका छन् । २०१७ मा बरुण धवनका २ वटा फिल्म ‘बद्री नाथ कि दुल्हनिया’ र ‘जुडवा २’ प्रदर्शन भएका थिए । दुईवटै फिल्मले दुई सय करोडको व्यापार गरे । यी दुवै फिल्ममा बरुणले गरेको अभिनय पनि निकै दमदार थियो ।
१०. अजय देवगन – अजय देवगनले आफू हरेक समयको लागि बनेको नायक भनेर प्रमाणित गरिदिएका छन् । अजयका २ वटा फिल्म रिलिज भए । फिल्म ‘बादशाहो’ सोचे जस्तो सफल भएन ।
उनको अर्को फिल्म ‘गोलमाल अगेन’ बाट उनले पाएको सफलता सायद अजय कहिल्यै बिर्सनेछैनन् । ‘गोलमाल अगेन’ले तीनसय करोडभन्दा धेरैको कमाई गरिसकेको छ । बलिउडमा यसअघि कुनैपनि कमेडी फिल्मले बक्स अफिसमा यति धेरै कमाई गरेको थिएन । अजय देवगनले आजसम्म अभिनय गरेका फिल्ममध्ये ‘गोलमाल अगेन’ नै सबैभन्दा हिट फिल्म बनेको छ ।